Google ၏ Pixel3သည်အားသွင်းနေစဉ်အပူလွန်ကဲပြီးပိတ်ထားသည် Androidsis
ဖန်တီးရန်မလုံလောက်ဟုထင်ရသည် အထင်ကြီးစရာကင်မရာစွမ်းရည်နှင့်အတူဖုန်းရန် ဒီအချိန်, el Google Pixel3နောက်ထပ်ပြproblemနာတစ်ခုတင်ပြသည်, မှဖြည့်စွက်တ အခြားအားနည်းချက်များ ၎င်း၏စျေးကွက်စတင်ကတည်းကတင်ဆက်ခဲ့သည်။
ယခုအခါ Reddit, Twitter, YouTube နှင့် Google ထုတ်ကုန်ဖိုရမ်များမှသုံးစွဲသူများစွာတင်ပြသောအရာအပေါ် အခြေခံ၍ အားသွင်းနေစဉ် Pixel3သည်ပိတ်သွားသည်. ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
ဂူဂဲလ် Pixel3အသစ်ကို ၀ ယ်ယူသောဖောက်သည်များကမူ၎င်းကိုပြောဆိုသည် အားသွင်းနေစဉ်အတွင်း device တွင်အပူပြissuesနာများရှိပါတယ်။ ပိုင်ရှင်များသည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာများတွင်၎င်းတို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသောအပူလွန်ကဲမှုပြshareနာကိုဝေမျှရန်ဤအဆင်မပြေမှုကိုယူထားကြသည်။
သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖော်ပြချက်အရဖုန်းများအားသွင်းစဉ်တွင်ပူလေ့ရှိသည် terminal ကိုပိတ်ထားသည်။ Pixel3ကိုအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းနှင့်ကြိုးမဲ့အားသွင်းနေစဉ်အတွင်းအပူလွန်ကဲခြင်းပြissuesနာများကိုလေ့လာတွေ့ရှိနိုင်သည်။ သို့သော်ကြိုးမဲ့အားသွင်းချိန်၌ပြtheနာသည်ပိုထင်ရှားသည်။
သို့သော်ဤဖော်ပြချက်သည်အသုံးပြုရသောအခါ ပို၍ ခက်ခဲသည်။ အားသွင်းနေစဉ်အတွင်းအချို့သောလုပ်ဆောင်မှုများပြုလုပ်သောအခါအဆိုပါကိရိယာသည် ပို၍ ပင်အပူပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုသည်စက်၏အပူချိန်ကိုသိသိသာသာတိုးစေသည်။ ထို့အပြင်ဗီဒီယို streaming ကဲ့သို့ပိုမိုရိုးရှင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်များသည် Pixel3ကိုသိသိသာသာပိုမိုပူပြင်းလာစေနိုင်သည်။ ဒါကတကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့ပြproblemနာပါ။
ဒီအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းရန်အသုံးပြုသူများသည် Pixel3အားသွင်းရန် third-party charger များနှင့် Google Pixel Stand တို့ကိုလည်းကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါပြproblemနာကိုတူညီသောလမ်းအတွက်ဆက်လက်ရှိနေသေးသည်. ဖတ်ပါ Google Pixel3XL နှင့်ပိုသောပြproblemsနာများ: multitasking လုပ်ခြင်းနှင့်ပြproblemsနာများ).
အပေါ်ကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းစက်ရဲ့အပူချိန်ဟာတစ်ချိန်ချိန်မှာမြင့်တက်လာပြီဆိုရင်စမတ်ဖုန်းကသတင်းစကားကိုပြလိမ့်မယ် "ဖုန်းကအရမ်းပူလာတယ်"။ အကယ်၍ စက်သည်ဆက်လက်အပူပေးနေလျှင်၊ ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ရန် Pixel3သည်အလိုအလျောက်ပိတ်သွားလိမ့်မည်။ အားသွင်းနေစဉ်စက်ကပိုပူလာပြီးပိုပူလာရင် ဒါကြောင့်အားသွင်းထားတဲ့မှာမြန်နှုန်းကိုလည်းအလွန်လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူများကမိုဘိုင်းသည်ဖုန်းအားအလွန်ပူသောအချိန်တွင်အားသွင်းနေစဉ်အတွင်းဘက်ထရီအားကုန်သွားသည်ဟုဆိုကြသည်။
ပြproblemနာမည်မျှကျယ်ပြန့်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲသည်။ ဤပစ္စည်းကို ၀ ယ်ယူသောသုံးစွဲသူများအားလုံးတွင်ဤပြproblemနာရှိနေသည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်အစားထိုးစက်တစ်ခုတောင်းခံလာပါပြီ။ သို့ရာတွင်ဂူးဂဲလ်အနေဖြင့်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ရန်မရှိသေးပါ။ အလားတူ ဒီတစ်ခု update ကိုအားဖြင့် fixed နိုင်ပါတယ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Google Pixel3မှာပြproblemsနာတွေဆက်ရှိနေသေးတယ်။ အခုအားသွင်းနေတုန်းအပူလွန်ကဲသွားတယ်